Sekuphinde kwenzeka futhi ukuthi inkampani yaseNingizimu Afrika kudingeke ukuthi ixolisele iphutha ‘elincane’ lobandlululo, kwaphinda futhi kwehlukana phakathi isizwe. Loku kwenzeke ngesikhangiso ebesikwiwebhusayithi yezitolo zakwa-Clicks eveze izinwele zabantu besifazane abamnyama njengezinwele ezimbi nezingalungile. Loku kubhebhezela umqondo omdala wokuthi izinwele zemvelo zabantu besifazane abamnyama aziyona imvelo. Lesi sikhangiso siqhubeke sakhombisa ukuthi izinwele zabantu besifazane babelungu ‘ziyimvelo’ futhi zinhle. Abasakazi bezindaba abehlukene, ikakhulu abesiteshi sezindaba i-eNCA, bezwakalise ukunengeka kwabo. U-Melanie Rice walesi siteshi uthe nsuku zonke uhlale ekhunjuzwa ezinkundleni zokuxhumana nalapho ehamba khona ukuthi ubumhlophe bakhe bumqoka njengoba kuhlale kugcizelelwa kwithelevishini, kumabonakude nakwezokukhangisa.
Khonamanjalo, baningi abantu abazwakalise ukunengeka kwabo ezinkundleni zokuxhumana. U-Julius Malema nenhlangano yakhe yezombusazwe i-Economic Freedom Fighters (i-EFF) balwele abantu besifazane abamnyama.
Ubandlululo akudingeki ukuthi luze lube sobala noma lube nodlame. Iqiniso wukuthi luziveza ngezindlela ezifihlakele. Imboni yezokukhangisa ibineqhaza elikhulu iminyaka eminingi ukubhebhezela izithombe ezibandlulula abantu besifazane. Isibonelo nje kwakuyisikhangiso sensipho eyayithi ihlanza isikhumba esimnyama isenze sikhanye, sibe msulwa. Umkhakha wezobuhle usebenzisa amatemu athinta ukuhlanzeka, ubumsulwa nokuvuseleleka bese ufihla ulimi oluthunaza umzimba omnyama noma abantu abamnyama.
Isikhangiso esifafaza umqondo wokuthi ubumhlophe buphezulu kanti ubumnyama buphansi ngeke buvele buthathwe ngokuthi yiphutha ‘lomkhankaso wokukhangisa.’
INingizimu Afrika yizwe elinodlame kanti udlame ludala udlame. Udlame luziveza ngezindlela ezehlukene kanti siwumphakathi kudingeka ukuthi sikhulume ngezinto ezingemnandi okuzogcina kwenze ukuthi isizwe sikhulume ngepolitiki yobuhlanga, umnotho wobuhlanga nendlela esizibona singabantu ngayo. Abantu abamnyama baseNingizimu Afrika basahlukene ngendlela abacabanga ngayo, okuqhuba ubandlululo lwabelungu abaningi bethu abasalwa nalo. Ukuthi abantu abamnyama abaningi abekho lapho kuthathwa khona izinqumo ezimqoka nezinqala ezingenza uguquko kwenza kube nzima ukuthi kube nobulungiswa ezweni lakithi.
U-Clicks akufanele ugcine ngokuxolisa nje ezinkundleni zokuxhumana noma ngokususa imikhiqizo yakwaTRESemme ezitolo zayo. Ukugcina ngokuxolisa kugqugquzela umqondo wobandlululo odlangile eNingizimu Afrika ngemva kweminyaka engama-26 kwaqedwa ubandlululo ngokusemthethweni. Uma le nkampani idinga ukusebenza eNingizimu Afrika, kudingeka ukuthi ibhekisise indaba yesimo sezinguquko ezikhulwini zayo.
U-Nks Luthando Ngema ufundisa eMnyangweni we-Media and Cultural Studies eSikoleni sezobuCiko, e-UKZN. Emikhakheni ehlukene yezinto azithandayo kubalwa ukuqonda amasiko asemadolobheni, ukubekwa kwezindaba zobulili nezobuhlanga emithonjeni yezindaba, ukuxhumana kwezombusazwe, nezokuxhumana zentuthuko.
Isithombe: Photobooth Durban
*Imobono eshicililwe ku-UKZN Voices eyombhali, akuyona eye-UKZN.